Ihe kpatara Flex na Apollo ga - eji kari | Martech Zone
N’abalị ụnyaahụ, mụ na ụfọdụ ndị enyi m nọrọ n’anyasị.
Emegbe akpa awa 3 na Ibe ala na-arụ ọrụ na saịtị ndị ahịa nke nwere ụfọdụ nchọgharị nchọgharị. E dere saịtị ahụ zuru oke, dị irè CSS. Agbanyeghị, iji Firefox 2 na PC ndepụta nchịkọta nhọrọ nwere njigide pixel jọgburu onwe ya na Internet Explorer 6, otu n'ime usoro CSS anaghị arụ ọrụ ma ọlị.
Firefox 2 (lelee ngbanwe pixel dị egwu nke na-eme ka ọ dị ka italic):
Nke a bụ otú o kwesịrị isi lee anya:
Eziokwu ahụ Apple, Mozilla, Microsoft, na opera enweghi ike ide ngwa nke jiri a Standardkpụrụ Weebụ kwesiri imenye onye obula ihere. Enwere m ike ịghọta ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị ọ bụla nwere atụmatụ nke ya nke enwere ike ịkwado site na ederede nke aka ha - mana nke a bụ ihe dị mkpa.
Nke a bụ ihe atụ zuru oke nke ihe kpatara ya Apollo na Flex guzosie ike ịza ingntanetị. M dere a di na nwunye ụbọchị gara aga banyere Mpempe akwụkwọ, ngwa etinyere na Flex (ma banye ngwa ngwa na Apollo). Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịhụ ya - gaa nwalee ya - ọ nweghị ihe dị ịtụnanya.
Flex na-agba ọsọ n'okpuru Adobe Flash si ihe nchọgharị. Nke a bụ ngwa mgbakwunye na 99.9% otutu nke Ntanetị na-agba ọsọ (ị na-agba ọsọ oge ọ bụla ị na-ele vidio Youtube). Apollo na-eji otu injin ahụ arụ ọrụ mana ọ na-enye gị ohere ịgba ọsọ na windo ngwa karịa ịbelata na ihe nchọgharị ahụ.
Kedu ihe bụ Flex?
site Adobe: Usoro ngosiputa Flex bu MXML, ActionScript 3.0, na akwukwo akwukwo Flex. Ndị mmepe na-eji MXML iji kọwaa ihe njirimara ndị ọrụ ngwa ma jiri ActionScript maka echiche ndị ahịa yana njikwa usoro. Mmepe dee MXML na ActionScript isi koodu jiri Adobe Flex Builder? IDE ma ọ bụ nchịkọta ederede ọkọlọtọ.
Nyere anyị nkụda mmụọ na-ewu a cross-nchọgharị mfe menu, were na-agbalị iru ihe dum ngwa weebụ na-akwado gafee nchọgharị! N'ikpeazụ, ndị mmepe ga-ede hacks ma ọ bụ ihe nyocha na-akọwapụta ihe nchọgharị iji hụ na otu ahụmịhe ahụ n'agbanyeghị ụdị ihe nchọgharị ma ọ bụ desktọọpụ ịchọrọ ịchọta. Enweghị nsogbu nchọgharị na uru ọzọ dị mfe nke izipu ngwa ahụ na Apollo iji gbaa ma ọ bụ pụọ na ihe nchọgharị ahụ.
Wezụga ichegbu onwe ya otú ọ dị na ihe nchọgharị ọ bụla, enwere uru ndị ọzọ. Ide maka Flex na-eme ọ bụghị chọrọ nhazi usoro ihe omume. Echere m na ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara na-eji eme ihe ọchị na-eji Flex ma ọ bụ Adobe eme ihe. Ọ ga-akara ha mma ma i were ọtụtụ iri puku dollar ka ha mepee atụmatụ ahụ na ASP.NET nke na-ewe usoro ole na ole MXML.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebe Flex na Apollo, denye aha na blog enyi m Bill.
Doug kwuru nke ọma. Ọ bụrụ na ndị ahịa tech tech enweta ya, enwere m olile anya dị elu maka ndị mmepe 😉
> Nke a bụ ngwa mgbakwunye nke 99.9% nke ịntanetị na-agba
Nwere ike ịchọ ịlele isi mmalite gị maka ọnụ ọgụgụ ahụ… 🙂
Lee ya, Eprel 2007 ma enweghị m onye ahịa ọkụ na-agba n'okpuru desktọọpụ Ubuntu x86_64 (AMD64).
Stivin - ị bụ eziokwu… nke a bụ ọnụ ọgụgụ na-enweghị atụ. N'ezie, ọ bụ ihe a maara dị ka a SWAG.
Ndo maka nke ahụ!
Nke a bụ njikọ gbasara ịbanye Flash - ugbu a 84.3% penetration na Flash Player 9.
Aug 21, 2007 na 11:15 PM
Doug kwuru nke ọma, Nice ntinye Stephen.
Aug 27, 2007 na 2:30 PM
Hmm .. Teknụzụ a na-akpali mmasị. Abụghị m onye mmemme, mana ka ị na-ede, ọ chọghị ya. Emechara, aga m elele ya.
Ọkt 22, 2007 na 9:18 AM
Edemede mara mma, ga-eche banyere ya.